Usuku My Pet » Indlela Uthando kungakusindisa of Trouble?
Okuhlangenwe nakho falling in love kuyinto wonke umuntu kufanele abe okungenani kanye impilo yakhe /. Into enhle wukuthi kukhona abantu abambalwa kakhulu akuzona nenhlanhla ukuba nakho esibe nakho lapha.
Nakuba uhambo lokuba love is okunomsoco ngokomzwelo, kukhona nezinye izici eziningi ezenza kokuba impilo uthando kubaluleke kakhulu. Love kungagcina ngempela osizini; funda on ukwazi kanjani.
Uyothola ubudala kancane
Yini kungaba enkingeni kunebhokisi looking ubudala? Love ongakuvimba inyamazane awela aguge. Uyazi oxytocin (the romantics abhekisela kuso ngokuthi hormone love)? Love okwenza imiphumela in ukwandisa ezingeni oxytocin emzimbeni womuntu. Oxytocin izingcipho ukukhiqizwa DHEA, a hormone eyaziwa for izinzuzo zayo anti-ukuguga.
Awuboni kanjani isikhumba sakho glows emva sex? Musa Uqaphelile ukuthi ngizikhandle uzizwa ekuseni ngemuva? Zonke lezi ngenxa izinzuzo anti-ukuguga of DHEA.
Uthando likufundisa ukuba izethembe
Zero noma ukuzethemba low kungaholela into eyodwa, a life elinezinkathazo. It ongakuvimba ukuthola umsebenzi ilungelo; kungaba kukuvimbele ekwenzeni wena wezwa esenkingeni, futhi ekugcineni ukuphoqa ukuba uhlale yomkhakha engaphansi lokho bafanelwe ukuba.
Omunye the best side effects of love is a umfutho in ukuzethemba. Uma wabelana ukuthandana nomuntu ngokuvamile lowo muntu ekwenza uzizwe superman / Superwoman. Yebo, umlingani wakho bangase bakugxeke izindaba ezithile, kodwa jikelele wena njalo uhlale the best for him / yakhe. Le self-inkolelo kuthanda ngokuzenzakalelayo instate kuwe futhi ube nokuzethemba okwengeziwe; futhi uma wena isigamu siqiniseka izinkinga zakho ixazululwe.
Love kungakwenza kude izidakamizwa
Ngeke kube khona ngesilinganiso zokuvimbela kangcono noma ikhambi izidakamizwa kunothando. Abantu e-United States kakhulu abakhathazwa rate elandayo kwezidakamizwa; Uthando kungaba ikhambi best kule nkinga.
Imikhuba efana nokusetshenziswa kwezidakamizwa nokuphuza kakhulu ngokuvamile byproducts ukucindezeleka. Umshado ophumelelayo awumi zigcwele uthando kungagcina ukucindezeleka at bay futhi kungaba anciphise komuntu amathuba ukunqotshwa izidakamizwa notshwala ngokuphawulekayo.
Love kuvimbela STDs
Uma umuntu, yini nje silindele ukuba / yakhe ukuba ibe qotho kuwe, kodwa futhi bavame ukuba agweme ukwenza noma yini Okuklwejiwe ngemuva lowo muntu. Ukuze wakubeka ngembaba more, abantu uthando abazigwemi ekubekeni umzamo owengeziwe ukuze bahlale beqotho futhi lokho ngokuyinhloko ngoba bengafuni ukuba ubuhlungu umuntu bethanda. Kodwa, indlela bafinyelele lokho kungahlanganiswa STD lokuvikela?
Kukhona isixhumanisi pretty eqinile.
Abantu othandweni ngenxa tryst yabo ngokwethembeka ngokuvamile bengayi fancy ucansi nabantu abaningi futhi lokhu kuyithuba kunciphisa amathuba abo STD asathuthuka. Yebo, kungcono elula njengokuthi ukuthi.
Lezi ezinye zezindlela uthando izinkinga lungakuvikela. Uma ufuna ukwazi ukuthi yini uthando ongakwenza, nje ukuthandana.